14 October 2021 ၂၀၁၈ ခုနှစ်က တွေ့ရသည့် သမ္မတဦးဝင်းမြင့် / ဧရာဝတီ
စစ်တပ်၏ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရပြီးနောက် ထွက်ပေါ်လာသည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ဗဟိုအလုပ်အမှု ဆောင်အဖွဲ့ ကြေညာချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ရာဇသတ်ကြီး ဥပဒေပုဒ်မ ၅၀၅-ခ ဖြင့် တရားစွဲဆိုထားမှုတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်က အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်နေ့ တရားခွင်၌ သက်သေ ထွက်ဆိုခဲ့သည်။
သက်သေ ထွက်ဆိုရာတွင် သမ္မတ အနေဖြင့် ကျန်းမာရေး အကြောင်းပြကာ ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ရန် ဖိအားပေး ခံခဲ့ရပြီး ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ထိခိုက်မှုများပင် ရှိလာနိုင်ကြောင်း ခြိမ်းခြောက်ခံရသော်လည်း အသက်သာ အသေခံမည် ဟုဆိုကာ နုတ် ထွက်ပေးရန် ဖိအားပေးမှုကို ငြင်းဆန်ခဲ့ကြောင်း ထွက်ဆိုခဲ့သည်။
သမ္မတ အနေဖြင့် သက်သေ ထွက်ဆိုရာတွင် တရားခွင်၌ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နေပြည်တော် မြို့တော်ဝန် ဒေါက်တာမျိုးအောင်တို့လည်း ရှိနေပြီး ၎င်းတို့ ၃ ဦးစလုံးသည် ရာဇသတ်ကြီး ဥပဒေပုဒ်မ ၅၀၅-ခ ဖြင့် တရားစွဲခံရကာ စွဲချက်တင်ခံထားရသူများ ဖြစ်သည်။
ထို့အတွက် စစ်တပ်၏ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပုံများ၊ တရားစွဲခံရမှု အခြေအနေများအပေါ် သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်၏ တရား ခွင်အတွင်း ပထမဆုံး ထွက်ဆိုချက်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရှေ့နေဖြစ်သူ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးကြည်ဝင်းကို ဧရာဝတီ က ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါသည်။
မေး ။ ။ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းတဲ့နေ့မှာ ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်က ဘယ်လိုများ ထွက်ဆိုခဲ့ပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ မနေ့က သမ္မတဦးဝင်းမြင့်က ထွက်ဆိုရတာဆိုတော့ သူ့ရဲ့ရှေ့နေဖြစ်တဲ့ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဒေါ်စန်းမာလာညွှန့်နဲ့ တဖက်ရှေ့နေတွေက စစ်မေးတာပေါ့။ အဲဒီမှာ သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် က သူက အသက် ၇၀ နှစ် ရှိပြီပေါ့။ နေရပ်လိပ်စာ ပြောတဲ့အခါကျတော့ သူက ကျနော် ဘယ်နေရာ ရောက်နေမှန်းတောင် မသိဘူး။ လိပ်စာ ဘယ်လို ပြောရမလဲဆိုတော့ အဲဒါနဲ့ ညှိလိုက်တဲ့ အခါကျတော့ သမ္မတအိမ်တော်မှာ နောက်ဆုံး ဖေဖော် ဝါရီ ၁ ရက်နေ့အထိ နေခဲ့တာပဲဆိုတော့ သမ္မတအိမ်တော်က သူ့ရဲ့ နေရပ်လိပ်စာ ဖြစ်သွားတာပေါ့။ သူ့ရဲ့ အလုပ်အကိုင် ကျတော့လည်း သမ္မတတဲ့။ အဲဒီတော့ ဦးဝင်းမြင့်က သူ့ကိုယ်သူ နိုင်ငံတော်သမ္မတလို့ပဲ ဒီကနေ့အထိ ခံယူထားလို့ နေမှာပေါ့။
အဲဒီတော့ ဆက်ပြီး မေးကြတဲ့အခါ ၂၀၂၁ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ (၁. ၂. ၂၀၂၁) မနက် ၅ နာရီလောက်မှာ သမ္မတ အိမ်တော်က အိပ်ခန်းထဲကို စစ်သားတွေ ဝင်လာတယ်။ လာပြီး ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတယ်ပေါ့။ အဲဒီလို ထိန်းသိမ်းလိုက်တဲ့ အခါမှာ သူ့ကိုခေါ်တော့ သူကလည်း ဆေးတို့ဘာတို့ ထည့်ပြီးတော့ ဘုရားခန်းထဲမှာ ဘုရားဝတ်ပြုတယ်။ ညဝတ်အင်္ကျီ အဝတ်အစား လဲပြီးတော့ စစ်သားတွေ ခေါ်တဲ့နောက်ကို လိုက်သွားရတယ်တဲ့။ ဘယ်ကို သွားတာလဲဆိုတော့ သမ္မတရုံး ကို ရောက်သွားတာ။ သမ္မတအိမ်တော်ကနေ သမ္မတရုံးကို ခေါ်သွားတာ။ သမ္မတရုံးကို ရောက်တော့ ရုံးခန်းထဲကို ခေါ်မ သွားဘဲနဲ့ ရုံးခန်းအဝမှာရှိတဲ့ ဆက်တီခုံမှာ ထိုင်ခိုင်းတယ်။ ထိုင်ခိုင်းထားတဲ့ အချိန်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးလား၊ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးလား ၂ ဦး ဝင်လာတယ်။
အဲဒီမှာ သူ့ကို ကျန်းမာရေး အကြောင်းပြပြီးတော့ နုတ်ထွက်ပေးဖို့ ပြောတယ်တဲ့။
သူက ကျန်းမာရေး ကောင်းနေတဲ့အတွက် နုတ်ထွက်မပေးနိုင်ဘူးလို့ ပြောလိုက်တယ်။ အဲဒီတော့ တယောက်က ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ထိခိုက်နိုင်တယ်။ ပြန်စဉ်းစားပါလို့ ပြောတဲ့အခါကျတော့ သူက နုတ်ထွက် မပေးနိုင်ဘူး၊ အသေပဲ ခံလိုက်မယ်လို့ ပြော လိုက်တယ်တဲ့။ ခင်ဗျားတို့ ဥပဒေနဲ့အညီပဲ လုပ်သင့်တယ်၊ အာဏာလည်း မသိမ်းသင့်တဲ့ အကြောင်းလည်း ပြောလိုက် ပါတယ်တဲ့။ အဲဒီလို ပြောဆိုပြီးတော့ သမ္မတအိမ်တော်ကိုပဲ ပြန်နေဖို့ပြောပြီး ပြန်ပို့ခဲ့တယ်လို့ ဦးဝင်းမြင့်က ပြောတယ်။
ပြန်ရောက်တဲ့ အခါကျတော့ သူက ဘုရားခန်းကို သွားတဲ့အခါမှာ ထမင်းစားခန်းကို ဖြတ်သွားရတယ်။ စစ်သားတွေ တော်တော်များများက စောင့်ကြည့်နေတယ်။ အဲဒီ ထမင်းစားခန်းဘေးမှာ အရင်က ဆက်သွယ်ရေး ပစ္စည်းတွေ ရှိတယ်။ သူရောက်သွားတဲ့ အချိန်မှာ အဲဒီ ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းတွေက လုံးဝ မရှိတော့ဘူးတဲ့။ ကျနော်တို့ မိသားစုရဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ပစ္စည်းတွေလည်း အကုန်လုံး သိမ်းသွားတယ်တဲ့။ နေ့လယ်ပိုင်းကျတော့ သမ္မတအိမ်တော်ကနေ ၃ ရက် အတွင်း ပြောင်းပေးရမယ်လို့ လာထပ်ပြောတယ်။ အဲဒါနဲ့ မိသားစုရှိတဲ့ အင်အားနဲ့ ပစ္စည်းတွေကို သိမ်းခဲ့တယ်တဲ့။
၃ ရက်လောက် ကြာတဲ့အခါ ၂၀၂၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်နေ့ (၄.၂.၂၀၂၁) ည ၇ နာရီလောက်ကျတော့ ဝန်ကြီးတွေနေတဲ့ အိမ်ရာဘက်က အိမ်တလုံးကို ရွှေ့ပေးရတယ်တဲ့။ ဝန်ကြီးအိမ်ရာဘက်မှာလည်း စရဖ အဖွဲ့တွေ၊ စစ်သားတွေ၊ ရဲတွေ ၂၄ နာရီ Duty (တာဝန်) နဲ့ စောင့်နေခဲ့ကြတယ်။ နောက် ၃ လလောက် ကြာတဲ့အခါ ၂၀၂၁ မေလ ၂၃ ရက်နေ့ (၂၃.၅.၂၀၂၁) ည ၁၂ နာရီလောက်မှာ ဝန်ကြီများအိမ်ရာ ဘက်ကနေမှ နောက်တနေရာကို ရွှေ့ရတယ်။ အဲဒီနေရာက ဘယ်နေရာမှန်း လည်း မသိဘူးတဲ့။ အဲဒီ အိမ်ရဲ့ ခြံဝမှာလည်းပဲ ဘာမှကို မမြင်ရဘူး၊ အကုန်လုံး ကာထားတာတဲ့။ အဲဒီမှာ စစ်သားတွေ အများကြီးပဲ စောင့်နေတယ်တဲ့။ အဲဒီတော့ ပြင်ပလောကနဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့ကစပြီး အဆက်ပြတ်သွားပြီး သတင်း တို့၊ ဂျာနယ်တို့ တီဗွီ ရုပ်မြင်သံကြားတို့လည်း မရှိဘူးတဲ့။ ဒါကြောင့် ပုဒ်မ ၅၀၅-ခ နဲ့ စွဲထားတာဟာ အမှုအတွင်း မှာ ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း မရှိဘဲနဲ့ ဒီလိုလာပြီးတော့စွဲတာ ယုတ္တိလည်း မရှိဘူးတဲ့။ ဒါကြောင့်မလို့ သူ့မှာ အပြစ်မရှိဘူးဆိုပြီး ချေပပြော ဆိုတာပေါ့။
မေး ။ ။ သမ္မတအနေနဲ့ မိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူ ထိန်းသိမ်းခံထားရတာလား။
ဖြေ ။ ။ အင်းပေါ့။ မိသားစုပါ အတူတူရှိနေတဲ့ သဘောပေါ့။ အတူတူ ရှိနေတယ်လို့တော့ တိုက်ရိုက် မပြောပေမယ့် အတူတူ ပစ္စည်းတွေ သိမ်းတယ်ဆိုတော့ အတူတူရှိနေတယ်လို့ပဲ မှတ်ယူရမှာပေါ့။
မေး ။ ။ သမ္မတရဲ့ ထွက်ဆိုချက်ဟာ အမှုအပေါ် ဘယ်လောက်အထိ သက်ရောက်မှု ရှိနိုင်သလဲ။
ဖြေ ။ ။ ဥပဒေပိုင်းအရပြောရင် အခု တရားလိုဘက်က အစိုးရရှေ့နေတွေက ရာဇသတ်ကြီး ဥပဒေပုဒ်မ ၅၀၅-ခ နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ စွပ်စွဲထားပေမယ့် သက်သေပြဖို့ တာဝန်က သူတို့ဘက်က ဒီဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်နေ့နဲ့ ၁၃ ရက်နေ့ က NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ (CEC) ရဲ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေမှာ သမ္မတဦးဝင်းမြင့် ကိုယ်၌က ပါဝင်ပြီး ထုတ် ပြန်ပါတယ်လို့ တရားလိုဘက်က သက်သေ မပြနိုင်ဘူး။ အဲဒီတော့ သက်သေပြရန်တာဝန်က တရားလိုဘက်က ပျက်ကွက် တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ တရားစီရင်ရေးက တရားလိုဘက်က သက်သေပြရန်တာဝန် မပြည့်စုံရင် စွဲချက်တင်လို့ မရဘူး။ စွဲချက် တင်ခဲ့ရင်လည်း ငါစွဲချက်တင်ပြီးပြီ။ စွပ်စွဲခံရသူဘက်က ရှင်းတော့ဆိုပြီး လုပ်လို့မရဘူး။ အဲဒါတွေက စီရင်ထုံးတွေ အများ အပြား ရှိတယ်။
သက်သေပြရန် တာဝန်က ဒီ CEC ရဲ့ အစည်းအဝေးတွေမှာ ပါဝင်ပြီးတော့ သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်က ထုတ်ပြန်တယ်ဆိုတာ တရားလိုဘက်က သက်သေ မပြနိုင်ဘူး။ နောက်ပြီးတော့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၄ မှာ “နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ ဒုတိယ သမ္မတများသည် နိုင်ငံရေးပါတီ တခုခုရဲ့ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လျှင်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတ (သို့မဟုတ်) ဒုတိယသမ္မတများအဖြစ် ရွေး ချယ်ခံရသည့် နေ့မှစ၍ မိမိတို့ ရာထူးသက်တမ်းအတွင်း ယင်းပါတီအဖွဲ့အစည်း၏ ပါတီလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက် ခြင်း မပြုရ” ဆိုတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို အတိအကျ လိုက်နာတယ်ဆိုတာကို ဦးဝင်းမြင့်က ရုံးမှာ ထွက် ဆိုသွားတယ်။ သူ သမ္မတရာထူး ယူပြီးတဲ့နောက်ကို ဘာမှ မလုပ်တော့ဘူးတဲ့။
အဲဒါအပြင် ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့ကစပြီး ထိန်းသိမ်းသွားတဲ့အတွက် ၇ ရက်နေ့နဲ့ ၁၃ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်တာတွေမှာ တပ်မတော်က ထိန်းသိမ်းထားတာ သိပါလျက်နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့တွေက အခုလို တရားစွဲတယ်ဆိုတာ မခိုင်လုံဘဲ စွဲတယ်ဆိုတာ ပေါ်လွင်နေတာပေါ့။ ဒါကြောင့်မလို ဒီပုဒ်မ ၅၀၅-ခ က သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်က ဘယ်လိုမှ ငြိစွန်းမှု မရှိဘူး။ ဒါကြောင့် စွပ်စွဲ ချက်က ဘာမှ အခြေအမြစ် မရှိဘူးလို့ သူက ရုံးမှာ ထွက်ဆိုသွားတာ။ ယုတ္တိလည်း မရှိဘူးတဲ့။ CEC စာရင်းထဲမှာ ပါရုံနဲ့ ဒီလိုပြောတာဟာ ယုတ္တိမရှိဘူး၊ သဘာဝမကျဘူးတဲ့။ တရားဥပဒေအရ တရားလိုဘက်က စွပ်စွဲချက်က ဥပဒေနဲ့ မညီဘူးပေါ့။
မေး ။ ။ တရားခွင်မှာ တရားလိုရှေ့နေဘက်က ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (CRPH)၊ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG)၊ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (PDF) တို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သမ္မတကို မေးမြန်းခဲ့သေးတယ်လို့ လည်း သိရပါတယ်။
ဖြေ ။ ။ ဟိုဘက်က ရှေ့နေတွေက CRPH၊ NUG ၊ PDF တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ သိလားလို့ မေးတော့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့ထဲက ပါသွားတာလေ ပြင်ပလောကနဲ့ အဆက်အသွယ် ပြတ်သွားတာ သူ ဘယ်လိုလုပ် သိမလဲတဲ့။ အဲဒီလို မေးခွန်းတွေမေးတော့ ဦးဝင်းမြင့်ရဲ့ ရှေ့နေက ကန့်ကွက်တာပေါ့။ ဒီမေးခွန်းက ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ CRPH၊ NUG၊ PDF တို့ ဆိုတာက နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်တဲ့ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့လို့ သူတို့ဘက်က ကြည့်မယ်ဆို ပါသွားတာလေ။ အခု စွဲထား တာက နိုင်ငံတော် ပုန်ကန်မှုမှ မဟုတ်တာ။ စွဲချက်တင်ထားတဲ့ ပုဒ်မနဲ့မဆိုင်တဲ့ မေးခွန်းတွေ မမေးပါနဲ့လို့ ဒီလိုပဲ ကန့်ကွက် အငြင်းပွားကြတာပေါ့။ ဟိုဘက်ကလည်း သက်သေခံ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၃၈ အရ မေးတာပါလို့ ပြန်ပြောတယ်။ သက်သေခံ ဥပဒေပုဒ်မ ဆိုတာက အမှုနဲ့ ပတ်သက်တာပဲ မေးရမှာ။ အမှုမှာ စွဲချက်တင်ထားတာနဲ့ မဟုတ်တဲ့ဟာကို မေးလို့ မရဘူး။
မေး ။ ။ တရားခွင်ထဲက ထွက်ဆိုချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အများပြည်သူ သိအောင် ထုတ်ပြန်ပေးဖို့ ပြောခဲ့တယ် ဆိုတာရော ဟုတ်ပါသလား။
ဖြေ ။ ။ ဟုတ်ပါတယ်။ သူကတော့ အခုလို တရားစီရင်တာဟာ အများပြည်သူ သိရမယ်တဲ့။ တရားစီရင်တယ်ဆိုတာ အများပြည်သူ ရှေ့မှောက်မှာ တရားစီရင်တာလေ။ စီရင်ထုံးတွေထဲမှာလည်း ရှိတယ်လေ။ တရားစီရင်တာကို မှန်ကန် ကြောင်း အများပြည်သူ သိရမယ်တဲ့။ ဒါတွေကို ထုတ်ပြန်ပေးပါလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောခဲ့တာ။
မေး ။ ။ အမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှေ့နေတဦးအနေနဲ့ ဘယ်လိုများ သုံးသပ်ချင်သလဲ။
ဖြေ ။ ။ ရှေ့နေအနေနဲ့ကတော့ ဥပဒေအရ မငြိစွန်းဘူးပဲ ပြောရမှာပေါ့။ တရားဥပဒေအရ ကြည့်ရင် အပြစ်မရှိဘူးပေါ့။ တရားလိုဘက်က သက်သေ မပြနိုင်တာ။ ဒီတရားခံတွေက ပြစ်မှုကျူးလွန်တယ်။ ဒီစာတွေက သူတို့ ထုတ်တယ်ဆိုတာ မပေါ်လွင်ဘူးပေါ့။ စွပ်စွဲခံရသူတွေ ကိုယ်၌က ဒီစာတွေ ထုတ်တယ်ဆိုတာ စွပ်စွဲသူတွေဘက်က သက်သေ မပြနိုင်ဘူး။
Topics: ၅၀၅ (ခ), စစ်တပ်, တရားခွင်, သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်